अब दक्षिणा नोटबाट होइन डिजिटलबाट, अफरै अफर, कुन एपमा कति अफर ? | सुदुरपश्चिम खबर
अब दक्षिणा नोटबाट होइन डिजिटलबाट, अफरै अफर, कुन एपमा कति अफर ?
एनआईसी एसियाले आफ्नो एनआईसी एसिया रेमिटमार्फत दशैँ, तिहार र छठ पर्व लक्षित निःशुल्क आन्तरिक रेमिट्यान्स योजना ल्याएको छ । सेवाग्राहीले पहिलोपटक रकम पठाउँदा शुल्क लागे पनि दोस्रोपटकमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भेषराज बेल्बासेले लेखेका छन् । उपहार खबर बाट सभार